Sidee si loo noqdo kaalmada ka diiwaan gashan ilkaha | USAHello | USAHello
Sidee si loo noqdo kaalmada ka diiwaan gashan ilkaha
kaaliyeyaasha caafimaadka ilkaha caawin ilkaha is ogow of bukaanka. Waa shaqada heerka galo wanaag iyo waxaa jira jagooyin sida caadiga ah dad badan oo u furan. Ogow sida loogu noqon caawiye ka diiwaan gashan ilkaha.
Waa maxay caawiyaha ilkaha ka diiwaan gashan?
xirfadiisa A waa caafimaadka ilkaha waa doorasho wanaagsan haddii aad xiiseynaya in ay caawiyaan dadka iyo daryeelka caafimaadka. Waxaa jira dalabka dheeraad ah oo shaqaalaha caafimaadka ilkaha ka badan waxaa loo tababaray dadka si ay u buuxiyaan shaqooyinka, sidaa darteed waxa uu siiyaa ammaanka shaqo. Mid ka mid ah shaqooyinka u fududahay in ay u tababaraan ee caafimaadka ilkaha waa in a ku xigeenka ilkaha diiwaangashan.
Maxaad ka fili kartaa in shaqo ee ilkaha diiwaangashan?
Waajibaadka a ilkaha diiwaangashan
A ilkaha ka diiwaan gashan yahay xubin muhiim ah oo ka mid ah kooxda daryeelka ilkaha. Isaga ama iyada waxa ay taageertaa shaqaalaha ilkaha iyo xafiiska. ballamaha samaynaysaa kaaliyaha ilkaha dadka bukaanka ah jadwalka iyo sii malafkaaga bukaan socodka. Waxay kaa caawin ilkaha halka uu isagu ama iyadu waa in aad aragto bukaanka. Waxay noqotay qalab, heli X-rays, iyo in la hubiyo bukaanka waa raaxo. Daawo a video ku saabsan shaqada ee caawiye ka diiwaan gashan ilkaha.
Inta badan kalkaaliyayaasha caafimaadka ilkaha shaqayn doonaa xafiiska dhakhtarka ilkaha ayaa laga yaabaa in ay leeyihiin ilkaha badan ama hal. caawiyee ilkaha shaqeyn doono xarun caafimaad, halkaas oo ilkaha waa qeyb ka mid ah kooxda daryeelka caafimaadka waaweyn.
MUSHAHARKA waayo, kaaliyeyaasha caafimaadka ilkaha diiwaangashan
Sida laga soo xigtay Xafiiska Shaqada Statistics, sida May 2014, kaaliyeyaasha caafimaadka ilkaha dhigay mushaar ah celceliska sannadlaha ah $35,390.
Ilkaha caawinta waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu dhaqsiyaha badan u kordhaya ee dalka Mareykanka. Dalabka ayaa hayn doona kordhaya, iyo ilkaha u baahan doontaa dadka si ay u buuxiyaan doorka kuwa.
Waa maxay nooca qofka ka dhigaysa wanaagsan ilkaha diiwaangashan?
Ogaanshaha sida loo bukaanka gargaar lahayn waayo-aragnimo fiican. Bukaanjiifka qaar ayaa laga yaabaa in cabsi si aad u baahan tahay si aad u dareento raaxo. Tan waxaa lagu magacaabaa isagoo a “hab chairside wanaagsan.”
xirfad xiriir oo wanaagsan inuu ka garab ilkaha iyo maamulayaasha shaqeeyaan
xirfad laakiin si raxmad leh ula xiriira bukaanka.
awood u leh inay taariikhda caafimaad si taxadar leh rikoor
awooda in ay qaataan x-rays
kartida ay u isticmaalaan qalabka ilkaha
Ajanabi ama qaxootiga, laga yaabaa inaad ku hadasho wax ka badan hal luqad. xirfadaha afkaaga waa hanti weyn ee shaqo kasta! Xafiisyada Ilkaha arka badan oo bukaanka qaba ku koobnayn Ingiriisi. xirfadaha afkaaga ku caawin kara bukaanka la xiriiraan iyo ku kalsoontahay.
Waa maxay tababarka, shahaado iyo khibrad aadan ka diiwaan gashan baahan kaaliyayaasha caafimaadka ilkaha?
Tababarka kaaliyeyaasha caafimaadka ilkaha diiwaangashan
Halka ay dalalka yar uma baahna ruqsad, badan oo iyaga ka qaban. Barnaamijka A caawinta ilkaha meel ka sagaal bilood qaadan kartaa laba sano si ay u dhamaystiraan, ku xiran tahay haddii ay tahay shahaado, shahaadada, ama barnaamijka shahaadada.
Ardayda sida caadiga ah ku dhameeyaan barnaamijka ku xigeenka ilkaha a diiwaan midkood Kulliyadda bulshada ama dugsiga farsamada. Waxa intaa dheer in baridda fasalka, barnaamijyada ugu gacan-ku fursado waxbarasho siiyaan meel clinical. Koorso caadi ahaan waxaa ka mid ah:
Maamulka xafiiska Ilkaha
CPR iyo Gargaarka Degdegga ah
shuruudaha Certification iyo liisan kala duwan ee gobolka. In dalalka halkaas oo shahaado loo baahan yahay, ardayda caadiga ah gudbaan DANB ee Certified Kaaliye Ilko (CDA) baaritaanka. Tani imtixaan 320-su'aal waa xarumaha imtixaanka Pearson VUE oo ka mid ah qaybaha soo socda:
General “chairside” dhaqanka
caafimaadka iyo ammaanka Shucaaca
Sidee si aad u bilowdo
First, sameeyo cilmi si aad u ogaato shuruudaha ee gobolka iyo dugsiyada suurtagalka ah aad ka baran kartaa. Waad awoodaa heli shuruudaha gobolka ee gargaarrada daryeelka ilkaha iyo raadiso kaaliyaha dugsiyada ilkaha.
Sida loo maalgeliyo waxbarashada
waxbarashada Ilkaha noqon karaan qaali, sidaa daraadeed waxa muhiim ah in aad qorshaha ka hor. Qiimaha barnaamij kala duwanaan karaan, gobol ka gobol, laga bilaabo $850 in $7560. barnaamijyada tababarka Qaar ka mid ah sidoo kale waxay yeelan karaan lacag dheeraad ah, sida imtixaanada diiwaangelinta, ajuurada shaybaarka, iyo alaab dheeraad ah. Ka hubi dugsiga aad dhigato doontaa inaad ogaato qiimaha saxda ah.
laga yaabaa inaad u baahan doontaa in shaqada inta aad ka baran. Laakiin waxaa jira siyaabo si ay u helaan lacag dheeraad ah oo aad waxbarashada. Waad awoodaa dalbato Gargaarka Ardayga ee Federalka. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in codsato deeq waxbarasho.
diirada: A ilkaha hore waa kuwa qaxooti ka yimid Suuriya uu si gargaar dadka ugu deeqday u baahan ee dalka Mareykanka.
Remote Area Medical (RAM) safaradiisa meelaha saboolka ah ee Mareykanka si uu u siiyo daryeelka ilkaha oo lacag la'aan ah dadka aan awoodi karin inay tagaan dhakhtarka ilkaha. Tani waxay ilkaha ka Syria, hadda ku nool Buffalo, New York, shaqo bilaabay in Maraykanka kaaliye ilkaha. Sida dhammaan shaqaalaha ilkaha RAM, wuxuu caawiyaa adeega si ay u caawiyaan dadka u baahan.
Daawo a BBC video ku saabsan RAM adeegga ilkaha ee mobile
Waddooyinkiisa mustaqbalkiisa ilkaha ee diiwaangashan